Serasera.org - Blog: mars 2015
Ny momba ny klipgasy.org
Tsy dia fombako ny mizara antsipirihany ny teknolojia momba ny site ataoko noho ny fanahiana hatrany ny mety hisian'ny lavaka eny antsefatsefany eny ka misy manararaotra hanimba zavatra. Fa amin'ity indray mitoraka ity dia tsy dia maninona loatra izany.
Navoakako afak'omaly ara ny voatra vaovaon'ny klipgasy.org. Efa tamin'ny 2007 no nisokatra voalohany ny klipgasy.org ary natao indrindra hanangonangonana hira antsary malagasy. Ny tanjona dia mba hahafahana mitady mora foana ireo hira n'ny mpihira iray na ireo mitovitovy karazana. Hatramin'izay dia blaogy tsotra tao amin'ny blogger.com no nametrahana azy. Ny anaran'ny mpihira no natao sokajy ka isaky ny manindry mpihira dia miseho ny hirany rehetra.
Nanomboka afak'omaly kosa dia ao amin'ny openshift.com no misy azy. Amin'izao dia mampiasa ilay toerana maimaim-poana atolotry ny openshift ary mifototra eo ambonin'ny Drupal. Ny endrika miasa dia zanak'endrika Zurb Foundation mba hahatonga ilay takelaka ho azo jerena amin'ny finday.
Nanamboatra module manokana koa aho mba hahafahan'ny mpikambana ao amin'ny serasera.org miditra avy hatrany mampiasa ny solonanarana sy tenimiafina avy ao amin'ny serasersa. Amin'izay dia tsy mila misoratra anarana vaovao intsony ny mpikambana amin'ny serasera. Raha toa ka tsy mbola mpikambana amin'ny serasera.org moa dia afaka misoratra anarana ihany koa.
Publié par Eugene Heriniaina à 3/27/2015 11:58:00 AM Aucun commentaire: Liens vers cet article
Asabotsy ny andro dia mandamindamina kely.
Nanokatra vm anakiray (103) hanaovana dev manokana. Debian Wheezy. Dia no-forwarder-na tamin'io ny port 80 avy amin'ny host dia nanjary nandeha tany amin'ilay 103 daholo ny requetes rehetra na dia avy amin'ny vm sasany aza.
Publié par Eugene Heriniaina à 3/14/2015 11:23:00 AM Aucun commentaire: Liens vers cet article
Misy extrait-n'ny hira ny tononkira
Napetraka ao amin'ny http://tononkira.serasera.org androany ny extrait-n'ireo hira maromaro izay misy ao amin'ny Radiovazogasy.com
Tsy ny hira rehetra aloha no efa ao fa efa ezahina tsikelikely.
Raha ara-teknika dia azo atao ny mampihaino ny hira manontolo fa tsy sombiny fotsiny saingy mbola mieritreritra hoe iza no omena alalana hihaino manontolo.
Publié par Eugene Heriniaina à 3/07/2015 11:40:00 PM Aucun commentaire: Liens vers cet article